မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံကြီးချဲ့တာ အစား ကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံဖေါ်ကြစို့
အကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံကြီးချဲ့တာ အစား ကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံဖေါ်ကြစို့
ဂျီတော့ခ် မတ်ဆေ့ခ်ျမှာ ကျမက "ဧပရယ်ဖူးမှာ ဘယ်သူ့မှ အရူးမလုပ်တော့ပါ..အရူးလာလုပ်ခြင်းလဲ သည်းခံပါ.."ဆိုပြီး တင်ထားတာကစလို့ ဘုန်းဘုန်း ဦးကုမာရနဲ့(http://www.ashinkumara.com) ပြောဖြစ်တာလေးကို ချက်လော့ပါဆွဲပြီးတင်လိုက်တာပါ။ashinkumara: ပုထုဇ္ဖနော ဥမ္မတကော me: :) တင်ပါ့ဘုရား1:15 PM နဂိုကတည်းက ရူးတာက ခံသာတယ် အရူးလုပ်ခံရရင်တော့ ဆိုးသွားတယ်ဘုရား ashinkumara: ပရိုပို့စ် လုပ်ထားသူရှိရင်..ဒီနေ့ အဖြေပေးလိုက်ပေါ့ me: အယ် ဘာပုလို့လဲ ဘုရား ashinkumara: ဟားဟား.. တက်သာ ဆုတ်သာ ရှိတယ်..လေ. သူက တကယ်ချစ်တယ်..ကောင်းတယ်ဆိုရင်အတည် .ပေါ့ me: မလုပ်ပါနဲ့ ဘုရား သူရူးသွားရင် ၀ဋ်လည်မှာကြောက်တယ်ဘုရား1:16 PM ashinkumara: သူက မကောင်းဘူးဆိုရင်...လည်း ပြန်ဆုတ်လို့ရတယ်လေ.. ဟုတ် အေပရယ်ဖူး...ဘာညာ ဆိုပီ me: ၀ဋ်မှာအမြဲတဲ့ ဘုန်းဘုန်း ကြောက်ဘူးလား ashinkumara: ၀ဋ်.. me: ငရဲက လွတ်နိုင်တယ်1:17 PM ashinkumara: အင်း..ဟောပါ ကွယ.်.. me: ဟုတ်ဘူးလား ashinkumara: နားထောင်နေပါတယ်. ဟုတ်ဘူး...1:18 PM me: ဒါကြောင့် ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာနဲ့ နိဗ္ဗာန်မရခင်စပ်ကြား ၀ဋ်မလည်ဖို့ကြိုရှောင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလား ဘုန်းဘုန်းရ ashinkumara: ၀ဋ်အမြဲ သာ မှန်ရင်..အင်ဂုလိမာလ တို့ ရှင်မောက်ကလန် တို့ဘယ်လွတ်မလဲ.. me: တပည့်တော် ပြောပီးပီလေ ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာနဲ့ နိဗ္ဗာန်မရခင်စပ်ကြား ၀ဋ်မလည်ဖို့လို့ ashinkumara: ဒါကြောင့် အမြဲ ဆိုတာ မှားတယ်.. me: သူတို့လိုမိုး ပါရမီရှိဘူးထင်ပါတယ် အော် အမြဲဆိုတာကိုပြောတာလား1:19 PM ယေဘုယျသဘော ဟုတ်ဘူးလား ashinkumara: တို့ကပြန်ပြောချင်တယ်ဟာ.. ကောင်းကျိုးအမြဲ လို့ me: အနတ္တ သဘောနဲ့ဆိုရင်တော့ အမြဲရှဘူးပေါ့ ကောင်းကျိုးလဲ ကိုယ့်အကျိုးပေးတဲ့ အချိန်ကျမှ ပေးမှာ ဟုတ်ဘူးလား ashinkumara: ၀ဋ် ဆိုတာ ကြီးနဲ့ ခြိမ်းခြောက် မနေတော့ပဲ ကောင်းကျိုးဆိုတာနဲ့ ခြီးမြောက် ချင်တယ်. me: ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကောင်းကျိုးက ဘယ်ဇောနဲ့ စောလဲမှ မသိတာလေ1:20 PM 7ရက်အတွင်း 1လအတွင်း 1နှစ်အတွင်း ဒီဘ၀အတွင်း အကျိုးမပေးပဲ နောင် ဘယ်ဘ၀ဘယ်ကာလမှ အကျိုးပေးမှာမျိုးကျလဲ မသိနိုင်ပါဘူး ဘုန်းဘုန်းရာ ashinkumara: အကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံကြီးချဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့စကားပုံတွေအစား ကုသိုလ်အကျိုးကို ဖေါ်ပြထားတဲ့ စကားပုံတွေ ထွင်ချင်တယ်. အလယ်.. me: တင်ပါ့ ဘုရား1:21 PM ashinkumara: အကျိုးမပေးတော့ အောင် လုပ်ပေါ့. အဟောသိကံ ဖြစ်..ပီးရော. me: မကောင်းမြင် အကုသိုလ် ပုံကြီးချဲ့ထက် အကောင်းမြင် ကုသိုလ်ကိုပုံဖေါ်တာကတော့ ပိုကောင်းပါမယ်ဘုရား ashinkumara: ဒီ နောင် ခံ ရမယ် ဆိုတာ နဲ့ဖြဲချောက်နေမဲ့အစား...... ဟုတ်ပါတယ်...1:22 PM ငါ့ဘက် က တစ်ယောက်ရပီ..တို့ခေတ်မှာ အဲသလိုပုံဖေါ်ရအောင် me: ဘုန်းဘုန်းရေ တချို့လူတွေကျတော့လဲ အဲလောက်ဖြဲခြောက်တာတောင်နောင်သံသရာ မကြောက်တဲ့ လူ့ငနွားတွေ တစ်ပုံကြီးမဟုတ်ပါလား ဘုရား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပည့်တော်လဲ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ အတူ ပုံဖေါ်တဲ့သူပဲ လုပ်မယ် ဘုရား ashinkumara: ဖြဲခြောက်တဲ့အလုပ်ဟာ စည်းရုံးရေး အသွင်မဆောင်ဘူး...လို့ယူဆရတယ်.1:23 PM me: တင်ပါ့ဘုရား ဒီမိုကရေစီကျအောင်ပေါ့နော် ဘုန်းဘုန်း ashinkumara: ရှိပီးသား လူတွေ အပြင်ထွက်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်..၊ အေးအေး..ဂွတ်ရှယ်.. သာသနာပြု ကွယ်.. me: အခု ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ပြောတာတွေ ပို့စ်တင်လိုက်မယ်နော် ashinkumara: တွေ့တယ်မို့လား.ဓါတ်ပုံထဲမှာလေ..အားမကျဘူးလား ရပါ့ဗျာ..1:24 PM me: အဲဒါမှ ကုသိုလ်ကို ပုံဖေါ်တဲ့သူတွေ တိုးလာမယ်မဟုတ်လား ဘုရား ashinkumara: ဟုတ်ပ.. me: ခုတော့ ထမင်း သွားစားလိုက်ဦးမယ် ဗိုက်ဆာပီ တာ့တာ ashinkumara: အကောင်းမြင်သဘော ကိုလည်းဆောင်ပါတယ်. ကောင်းပါပိ. တာ့တာ me: ဆီးယူ ဘုန်းဘုန်း ဦးကုဒီပို့စ်လေးကို အရှိ ပြောတဲ့ အတိုင်း တင်လိုက်တာပါ။ တကယ်ရည်ရွယ်မိပါတယ်။ကုသိုလ်ကို ပုံဖေါ်တဲ့သူတွေ တိုးသထက်တိုးလာမယ် များသထက်များလာမယ် ဆိုရင်တိုင်းပြည်လဲအေးချမ်းလဲ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာအပေါင်းလဲ ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်တွေ သီကြူးလိုက်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာလေး အရမ်းကြိုက်တယ်း-)
April 2, 2008 at 7:19 AM
စင်ကာပူတွင် အလုပ်ရှာရာ၌ အမေးခံရတတ်သော အင်တာဗျူးမေး...
ကူညီချင်ကြသူများ ကော်နက်ရှင်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပါလ...
သံလွင်ကို အိမ်မက်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့ တေးသွားကို ကြားရ...
မြန်မာကျူးပစ် နှစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ဂျာနယ်
Types of Web Application
အကုသိုလ်အကျိုးကို ပုံကြီးချဲ့တာ အစား ကုသိုလ်အကျိုး...
Common Top-Level Domains